Indlu yamaplanga emangalisayo enegadi 1+1 - I-Airbnb
Indlu yamaplanga emangalisayo enegadi 1+1
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguEmin
UEmin unezimvo eziyi-71 zezinye iindawo.
Ngaphakathi egadini, igumbi lokulala elisemgangathweni linophahla oluphezulu, liphoswa ngamaplanga, kwaye yinto entle kakhulu kumbono wendlu esedolophini apho ungahlala khona everandeni uze udibane nokuthi cwaka. Ithuba lokutya ukutya okuthotyiweyo, iitomato, iipelepele, amatswele, amatswele aluhlaza asuka kwindlu yethu eluhlaza. Isonka esimuncis 'iintupha esisenzele udadewethu kwilali, ukuba uyafuna, iqanda ledolophana esishiya ekhaya, kusenokubakho ukutya okunempilo kunye ne-yogurt esandul' ukuvunwa
Ngaphakathi egadini, igumbi lokulala elisemgangathweni linophahla oluphezulu, liphoswa ngamaplanga, kwaye yindawo entle yokubona indlu esedolophini apho ungahlala khona everandeni uze udibane nokuthi cwaka. Kusenokwenzeka ukuba uncokole ngasemlilweni ngokuhlwa. Uya kudlula ejinga ujingi kwaye mhlawumbi ulale kancinci kwi-hammock. Indlu nganye inendawo yayo yokoja nokuzonwabisa, ingaba yintoni enye?
Ngokuqinisekileyo le lali yikona esuka ezulwini. Intsikelelo ka Thixo. Indawo ephakathi kweengxangxasi zemvelo eziyi-3, kufutshane nepaki yelizwe yechibi lase-Efteni, ichibi elihle le-tul kunye nezinye iindawo eziphakamileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Emin